Wonke umntu uyazi ukuba enye yezona ziganeko ezibalulekileyo ebomini bomntu lifumana ithuba lokufumana umlingane wabo womntu, emva koko bangakwazi ukutshata, batshata baze babe nabantwana.
Kodwa kungekhona yonke into ebonakalayo yinto ekubonakala ngayo ekuqalekeni. Into ebaluleke kakhulu kukukwazi ukugcina intsapho yakho, kuba oku kunzima kakhulu kunokuyidala.
Ubomi bentsapho buzaliswe yimimangaliso kwaye ngale ndlela kufuneka uhambe ngeqela lezithintelo. Ukungakwazi ukuwunqoba ngokuqhelekileyo kwaye yimbangela yokuqhawula umtshato. Esinye sezizathu eziphambili ezinokuchaphazela ulwalamano lwentsapho ngumnqweno nomnqweno womntu ukuba anelise iimfuno neemfuno zabo.
Ababulali bokwenene bemitshato banesimo esibi - iimpumbo, umsindo nomsindo.
Xa abantu bephelelwa yimonde, bavele banqume ngokukhawuleza ngokuqhawula umtshato.
Ngamanye amaxesha abantu abakucingi malunga nokuqhawula umtshato, kwaye nangakumbi malunga nemiphumo ekhoyo yokupheliswa kobudlelwane. Abantu bakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba kuya kuzisa uvuyo kubo, kodwa ngaba abaphosakeli?
Ehlabathini lanamhlanje, abantu bazama ukuyeka okokuqala kwiintlanano zentsapho, kuba isifungo sokunyaniseka komnye silahlekelwe ngamandla kwaye asinakwenzeka.
Ngokukhawuleza, inani labasetyhini likhula ngubani ngoxolo lwengqondo bazala abantwana babo yonke imitshato, njengoko amadoda amaninzi asayiva ukuba kulungile ukubhalisa ngokusemthethweni ubudlelwane babo bomtshato kwiinqanaba zokuqala zomtshato. Indima yabathandekayo kwintsapho sele ishintshile kakhulu.
Ndixelele, ngaba kunokwenzeka kwiimeko ezinjalo ukudala intsapho eqhelekileyo?
Ukuba ufuna ukudala intsapho efanelekileyo kwaye ufuna ukuba ube nolonwabo ubomi bomtshato kunye nomthandayo okanye othandekayo, into ebaluleke kakhulu ukuba uyenze ukuguqula ngokucokisekileyo umfazi wakho okanye umfana.
Ukuba ufuna ukudala kwaye ube nobomi obonwabileyo emtshatweni wakho nomthandayo, into yokuqala yokuyenza iguqula ukucinga kwakho. Ukuba ekugqibeleni wagqiba ukutshata nomntu, gcina ukhumbula ukuba kuya kufuneka unakekele umfazi wakho njengoko uzikhathalelayo. Yazi ukuba ulonwabo alusekelwe kwizinto eziphathekayo, kodwa kusekelwe ekuqondeni ngokuvisanayo kwengqondo kunye nentliziyo yabathandi.
Kwakhona ungakulibali ukuba uhlala uhlawulela into ethile. Kuye kube njalo, ngoku ikhona, kwaye kunokwenzeka ukuba, kuya kuba njalo. Isibingelelo siya kuba nexesha, umsebenzi, iinjongo zobomi, imali kunye namanye amaxabiso. Uzinikele kuphela ngenxa yobomi obonwabileyo kunye nomthandayo, kodwa nangenxa yobomi obonwabileyo kubantwana bakho. Ubomi abupheli ngokupheleleyo. Ukufezekisa inhlalakahle yentsapho, unokulahlekelwa ngumsebenzi okanye umsebenzi wakho. Yazi ukuba oku akuyona nto ephambili ebomini. Emva kwakho konke, uya kuba nenjongo yokuphila. Kwaye kufuneka uhlala kwimidyarho yabantwana bakho.
Imanyano yentsapho ayikwazi nje ukuphazamiseka, kodwa iphinda ikhule ngakumbi ... kulo mzekelo, bobabili indoda nomfazi kufuneka baxhase kuzo zonke iinjongo ukuze bancede bafezekise iinjongo zabo. Ukucaphuka kwakho, ukudideka okanye umsindo uya kuthatha indawo yothando kunye nokuqonda okupheleleyo. Isixhobo esona sikhulu ngokuchasana nomtshato siyakwazi ukuxolela umntu omthandayo, siyiqonde imbono yakhe kwaye sikhohlwe zonke izikhalazo.
Ukuba uxabana, zama ukuzithethelela ngokukhawuleza okukukhathazayo kule nto okanye kuloo meko. Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba ukuxabana kubangelwa ukuba akukho mntu ufuna ukuyeka okanye ukuvuma ukuba wayengafanelekanga. Funda ukufumana iimpazamo zakho. Funda ukuqonda isiqingatha sakho esithandekayo okanye esithandekayo njengoko kunjalo kwaye ungazami ukutshintsha okanye ukubonisa into ethile. Okona kubaluleke kakhulu - musa ukuyeka ukuthetha omnye nomnye.
Ndikunqwenela umtshato onolonwabo kubathandekayo bakho.
Indlela yokufumana ngokukhawuleza umlingane womphefumlo
Iingcebiso ezimbalwa malunga nokufumana umthandi wakho kwakhona
Amanqanaba amathathu olwalamano lomntu kunye nomntu: i-pros and cons
Uthando luvakalelo olukhulu emhlabeni
Ndidibana nabafana ababini, kuya kuthini na?
Uthando ngaphandle kwa maxhoba
Indlela yokuyeka ukwesaba ukulahlekelwa ngumthandayo
Iindlela zokupheka ezintsha zokutya okunempilo
I-American Film Academy ayiyi kunika kulo nyaka "Oscar" nguLeonardo DiCaprio
Ukutyunjwa kwindlu ekhaya ngonyaka omtsha 2017 Firecracker, isithombe
Iprotheni yenkukhu yenkukhu, iipropati
Imilinganiselo yokuziphatha kunye nengqondo ukuze kuvuselele umdla kumsebenzi
Kutheni umntwana oyika umnyama
Uvavanyo lokulungelelaniswa nokusebenza ngokomzimba
Ubunzima bokutshata kwakhona
Isaladi kunye ne-tuna kunye noshizi
Ezemidlalo ziqhuba - inkqubo yomzimba
Ndiyiminyaka eli-17 ubudala, ndifuna ukufumana umntu
Ukutshiza i-trout pate